Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo maanta xilkii ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo maanta xilkii ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ilaa 54 xildhibaan uu shir guddoominaayay guddomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Galmudug Xareed Cali Xareed ay codkii kalsoonida ahaa kala laabteen madaxweynaha maamulkaasi C/kariin Xuseen Guuleed.
Kulankaasi oo ay maanta soo xaadireen illaa 59 xildhibaan ayaa waxaa codka kalsoonida ah madaxweyne Guuleed kala laabtay illaa 54 xildhibaan oo ka tirsan maamulkaas, kadib markii ay dhaliilo badan u jeediyeen.
Xildhibaanadaasi ayaa dhawaan mooshin ka keenay madaxweyne C/kariin Guuleed, waxayna ku eedeeyeen inuu joojiyay howlihii ka socotay maamulkaas.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa kulanka kadib sheegay in dhawaan lasoo magacaabi doono guddi doorasho oo soo diyaariya doorashada madaxweyne cusub ee uu yeelan doonno maamulkaas.
Dhinaca kale, C/kariin Guuleed oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in wax kulan ah aanu ka dhicin magaalada Cadaado, islamarkaana xildhibaanada kulanka halkaasi ku yeeshay ay yihiin kuwa qas-wadayaal ah, islamarkaana baarlamaanka maamulkaasi uu haatan fasax ku maqan yahay.